Kusho ukuthini ukuthenga ukuthenga? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki siqu
Uma uphupha ukuba nekhaya lakho, kodwa awunayo imali edingekayo okwamanje, ungaba neyodwa siqu kube mnandi.
Isimiso sokuqasha indawo
Kule ndlela ehlukile yokuxhaswa kwemali, isivumelwano sokuqashiswa siphethe okuvumela ukuthi impahla idlulisele impahla yomqashi ngokuhamba kwesikhathi. Ngokwenza kanjalo, inani lokugcina lokuthengwa kwempahla seluvele linqunywe lapho isivumelwano sesivumelwano siphelile.
Lokhu kubuye kuvumela abaqashi abancane ukulingana ekhaya elifunayo. Kunezinhlobo ze-2 zokuthengwa kwemali, ukuthenga okuvamile nokuthenga okukhethwa kukho.
Ukuthengwa okuqashisayo okudala
Lokhu okungafani kwezimali zezindlu zangaphandle kubophezela kokubili amaqembu futhi kudinga ukuthengwa kwefulethi noma indlu. Esikhathini esinenkontileka efanele, umninikhaya kanye nomqashi ubeka kusengaphambili izimo lapho indawo eqashiwe iqashiwe khona endaweni yomqashi. Kuyinto evamile ukuthi inani le-20 lentengo yokuthenga kufanele lisetshenziswe kusengaphambili ukuthengwa okuqashisayo okudala. Le diphothi ihambelana nokulingana kwangempela okumele kuphakanyiswe ekuthengweni kwezindlu zangempela futhi kudingeke ngaphambi kokudalwa kwezenzo zesaziso.
Isamba sokuthenga kanye nokuvela kwesithakazelo kuhlehlisiwe ngesikhathi sokuthengwa kwemali, okusho ukuthi isikhathi sokukhokha esinqunyiwe sinikezwe. Umqashi uhlawula izikweletu zakhe ngendlela yokuqasha ngenyanga. Kuye ngesivumelwane kanye nenani lerenti, izindleko eziphelele zingakhokhwa yiholo lenyanga kuphela noma ngezinkokhelo ezengeziwe. Isikweletu sokuhlala singathathwa ngesikweletu, isibonelo. Endabeni yokukhokha okugcwele ngenkokhelo yenyanga, isikhathi sokuthenga ukuqasha kuyoba isikhathi eside, kodwa akufanele kulindeleke ukuthi izibopho zokukhokha ezengeziwe ezingenakulinganiswa.
Ukuthenga okukhethwa kukho
Lokhu okungafani kokuthenga okukhethwa kukho kuvame ukuhlinzekwa ngabambisenezi kanye nezibonelelo kuphela ukukhetha ukuthenga impahla lapho kuqedelwa ukuqashwa. Ukuqashisa akukwenzi ngokuzenzakalelayo umqashi ukuba athenge indlu noma indlu ahlala kuyo. Kodwa-ke, uthola ilungelo loku-pre-emption ekhaya lakhe. Isikhathi okufanele asithenge ngaso sonke isikhathi cishe ngeminyaka ye-25. Ngemuva kokuphelelwa yisikhathi, leyo ndawo kufanele ithengwe ngentengo enqunywe ekupheleni kwesivumelwano sokuqasha. Ngakho-ke ukuphakama kwesikhathi esizayo noma ukwehla kwamagugu angasetshenziswa kungacatshangwa.
Izinzuzo nokungalungi kokuthengwa kwemali
Njengakho konke okunye ekuphileni, ukuqashisa kunezinzuzo ezithile nokungahle kwenzeke, okumele kucatshangelwe kahle ngaphambi kwesiphetho futhi kufanele kulinganiswe nomunye nomunye.
Inzuzo ecacile kakhulu ukuthi ukuthengwa kwekhaya kungaphinde kutholakale ngokusebenzisa ukuthengwa kwemali ngokulingana okuncane noma okungekho. akukho sikweletu esidinga ukuphathwa. Isikweletu asikwazi ukufezwa ngale ndlela. Inkokhelo yokuqasha yenyanga yonke iyingxenye ehlanganisiwe ekubuyisweni kokuthengwa kokuqasha. Intengo yokuthenga ihleliwe ngakho-ke ihlelwe kulo lonke isikhathi. Isikhathi eside sisebenza futhi sikuvumela ukuba usindise isamba esisele ukuze kungabikho mboleko eyengeziwe okufanele ithathwe.
Enye yezinto ezingathinteki kakhulu ukuthi ukugcina imali yokugcina imali kuvame ukuphakama kakhulu uma uthenga indawo yokuqashisa kunokuqhathaniswa nezimali zendabuko. Ngaphezu kwalokho kukhona izimali zokuvala nokuxoxisana, okufaka encwadini.
Ngisho noma uhulumeni wesifundazwe ekhuthaza ukuthengwa kwezindlu ezinezinhlelo ezahlukene, lokhu akubandakanyi ukuthengwa kwemali. Ngakho-ke zonke izindleko kumele zisetshenziswe umthengi ngokwakhe.
Isihloko sangaphambiliniBanking Act